သတင်းစုံ Archives - Update New
အမာခံအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် အေးမြဖြူ ရဲ့ အရေးပေါ်မေတ္တာရပ်ခံ ချက်တစ်ခု
November 16, 2019 Naing 0
အမာခံအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် အေးမြဖြူ ရဲ့ အရေးပေါ်မေတ္တာရပ်ခံ ချက်တစ်ခု ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မနေ့ညက မြန်မာသံ တေးသီချင်းလေးကို အကောင်းဆုံးသီဆိုပြခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူလေးတစ်ယောက်ကို မမေ့ကြသေးပါဘူးနော်။ အေးမြဖြူလေးက တော့ အဆင့်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် Winner ဖြစ်နိုင်မယ့်သူဆိုပြီး တစ်ပြေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြဖြူတစ်ယောက် ချစ်ရတဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေအတွက် […]
October 31, 2019 Update New 0
မိန်းမသားပဲဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး…ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိပ်လုပြီး မောင်းပြေးတာ…အာဂမိန်းမနဲ့တွေ့သွားတဲ့ ငနဲသား မိပီလေ။ ဖြစ်ပုံက အက်ရှင်ဆန်ဆန်ပဲဗျာ…… ဆိုင်ကယ်ချင်းကပ်ပြီး ပိုက်ဆံအိပ်လု မောင်းပြေးတာ…… မိန်းခလေးကလဲ နောက်ကနေ တလကြမ်းမှီအောင်လိုက် ဝင်တိုက်ပစ်တာ…….. ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးလုံး သူလဲ ကိုယ်လဲပဲ…..သတ္တိကောင်းတဲ့ မိန်းခလေးက ချက်ချင်းပဲ ငနဲသားကို ဂုတ်ဆွဲ ဖမ်း ထားတာ….. ကြည့်လိုက်တော့ခါးမှာလဲ ဓားမြောင်နဲ့……ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲဝိုင်းကူတော့ […]
မူးယစ်ဆေးဝါးလည်း သုံးထားတယ်။ ကြိုတင်ကြံစည်မှုလည်း သိသာနေတယ်။ သေစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို တချက်တည်းမဟုတ် ၆ချက်တိတိ ဓားနဲ့ထိုးသွင်းပြီး ကျွန်တော့်ညီမလေးကို သတ်သွားတဲ့ လူတယောက်လို့ မခေါ်ထိုက်တဲ့သက်ရှိဝတ္တုတခုအတွက် ကျေအေးခြင်းကလုံးဝမရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေက ခွင့်လွှတ်ဖို့၊ သည်းခံဖို့၊ အချင်းချင်းချစ်ကြဖို့သွန်သင်နေပေမယ့် ဒီအမှုကိုနောက်ဆုတ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် သူတော်စင်တပါး မဟုတ်ဘူး။ ဒီအရာဝတ္တုကိုလွှတ်ပေးလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ညီမလေးလို နောက်ထပ် […]
မင်ျဂလာပှဲနဲ့အသုဘကို တဈခြိနျထဲ ကငျြးပခဲ့ရတဲ့ စုံတှဲ
လကျထပျပှဲဆိုတာ ခဈြသူနှဈဦးအတှကျ အပြျောရှငျရဆုံးပှဲလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တရုတျနိုငျငံက သိပျခဈြကွတဲ့ခဈြသူ၂ဦးအတှကျကတော့ သူတို့ရဲ့မင်ျဂလာပှဲလို့ ဆိုလို့မရခဲ့ပါဘူး။အသကျ၃၅နှဈအရှယျ Xu ဆိုတဲ့အမြိုးသားဟာ ရငျသားကငျဆာကွောငျ့ ဆုံးပါးခဲ့တဲ့ သူခဈြရတဲ့မိနျးကလေးရဲ့အသုဘမှာပဲ သူတို့ရဲ့လကျထပျပှဲကိုကငျြးပခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ခဈြသူ အသကျ၃၄နှဈအရှယျ Yang ဟာ အသကျ၂၈နှဈအရှယျကတညျးက ကငျရောဂါခံစားခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။သူတို့၂ဦးဟာ တက်ကသိုလျတတျစဉျ အှနျလိုငျးမှာတှဆေုံ့ကာ ခဈြကွိုကျခဲ့ကွတာပါ။ […]
မိနျးကလေးမြား လုံးဝလုံးဝ သတိထားကွဖို့…. ဒီအဖွဈအပကျြလေးကတကယျ့အဖွဈအပကျြလေးပါ.
မိနျးကလေးမြား လုံးဝလုံးဝ သတိထားကွဖို့…. ဒီအဖွဈအပကျြလေးကတကယျ့အဖွဈအပကျြလေးပါ. သူငယျခငျြးတှအေားလုံးသငျခနျးစာယူသငျ့တယျထငျလို့မြှဝပေေးတာပါ ကြောငျးသငျခနျးစာဆိုတာ ကိုယျတိုငျက အခြိနျအကုနျခံပွီး လလေ့ာသငျယူကကျြမှတျရပါတယျ. ဘဝနဲ့ပကျသကျတဲ့သငျခနျးစာကိုတော့ မိမိပတျဝနျးကငျြမှာ တှနေ့ေ မွငျနရေတဲ့အဖွဈအပကျြကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျတိုငျက အဲ့ဒီလိုအမှားမြိုးမဖွဈအောငျ သတိနဲ့ဆငျခွငျနိုငျရငျတော့..ကိုယျ့ဘဝအတှကျ အရငျးအနှီး စိုကျထုတျစရာမလိုပဲနဲ့အလကားရတဲ့အမွတျပေါ့နျော… ဒီခတျေကွီးထဲမှာအလကားရတယျဆိုတာ ခပျရှားရှားရယျ..မနှဈက ထိုငျးနိုငျငံမှာနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျမှနျလေးပါ…ကောငျမလေးကတက်ကသိုလျကြောငျးသူတဈဦးပါ… နယျကနလောပွီးဘနျကောကျ မွို့ပျေါမှာကြောငျးလာတကျရငျးနဲ့Online ပျေါမှာ အမရေိကနျနိုငျငံသားတဈယောကျနဲ့ခဈြသူဖွဈခဲ့ပါတယျ..နောကျတော့ခဈြသူအမရေိကနိနျငျငံသားက […]
မင်ျဂလာဦးညမှာ သတို့သမီးမူးနတေုနျး သတို့သားမဟုတျတဲ့ အခွားလူက အတူဝငျအိပျသှားတဲ့ ဖွဈရပျ…
သတို့သားအမှတ်နဲ့ သူစိမ်းကို ညမှောင်မှောင်မှာ အလိုလိုက်ခဲ့တဲ့ သတို့သမီး သတို့သမီးတစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ ညမှာပဲ အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးကို သူမရဲ့ခင်ပွန်းထင်ပြီး အလိုလိုက် အတူအိမ်မိခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခုကြောင့် ဘဝပျက်လုနီးပါး ခံစားသွားခဲ့ရပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲအပြီးမှာ အမူးလွန်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့တဲ့ သတို့သမီးကို တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေတဲ့ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် ချန်ဆန်း ဆိုသူလူငယ်က သူမရဲ့ အိပ်ယာထဲသို့ […]
ခဈြသူရဲ့မှေးနမှေ့ာ ခဈြသူလေးကို ပြျောရှငျစခေဲ့တဲ့မအေးသောငျး
ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ပွနျလညျရရှိခဲ့ပွီးအနုပညာလောကကို တဈဖနျပွနျလညျဝငျရောကျလာခဲ့တဲ့ မအေးသောငျးဟာ ခဈြစရာကောငျးပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ခန်ဒာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးတဈယောကျဆိုရငျတော့မမှားပါဖူးနျော။ မအေးသောငျးဟာ လူမှုစာမကျြနှာပျေါမှာ ခဈြသူနဲ့ပတျသကျတဲ့ ခံစားခကျြအခြို့ကို အမွဲလိုလိုရေးသားတတျပမေယျ့လညျး ခဈြသူဖွဈသူကိုလူသိရှငျကွားတရားဝငျခပြွထားခွငျးမြိုးတော့ မရှိသေးတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျမအေးသောငျးဟာ ခဈြသူဖွဈတဲ့7Sense creation မှကိုဝမေငျးမောငျရဲ့ ၃၂ နှဈပွညျ့မှေးနလေ့ေးမှာ အမှတျတရဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ […]
Myanmar Idol မှာအကောငျးဆုံးသီဆိုယှဉျပွိုငျပွီး Top 10 ထဲဝငျသှားတဲ့ အေးမွဖွူရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ
လက်ရှိ Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်နေတဲ့ အေးမြဖြူဆိုတာကတော့ တစ်ချိန်က မြန်မာသံစဉ်လေးတွေနဲ့ ကလေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ အမြဲလို ဆုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ကလေးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက လက်ရှိမှာ ၁၀ တန်းကလေးတွေကို စာသင်ပေးရတဲ့ ဆရာမအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ဂုဏ်ထူး […]
အားကမြခံ လုလုအောငျလညျး ကိုယျတိုငျရိုကျ ဗှီဒီယိုဖိုငျ တငျလိုကျပွီ
လုလုအောင်ဟာ အချိုးအစားကျပြေပြစ်လွန်းတဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစား ပြေပြစ်လွန်းတာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း နာမည်ကြီးလူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာအောင်မြင်တဲ့ Sexy အကျဆုံးမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကချင်တိုင်ရင်းသူတောင်ပေါ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမဟာ အသားအရေကြည်လင်လှပပြီး မျက်နာကျလေးကပါ အေးချမ်းစွာ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးထားရတဲ့ ချစ်စရာသမီးချောလေးတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်ပြီး သူမ ဘဝရပ်တည်မှုမှာ […]
၁၁ နှစ်ကလေးအများစုမှာတော့ အပူပင်မရှိ ကျောင်းတက်နိုင် ၊ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆော့ကစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီကလေးလေးကတော့ သူရဲ့ မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ၄ နှစ်သားအရွယ် ညီငယ်လေးကို ချီပိုးရင်း ကျောင်းတက်နေရတာပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆော့ကစားနေတာကို ငေးမောကြည့်နေယုံကလွဲပြီး သူ့မသန်စွမ်းညီငယ်လေးကို ဂရုတစိုက် ပြုစုနေရလို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်မကစားနိုင်ရှာပါဘူး။ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအမည်ကတော့ အဲလစ်ပီရဲတာ […]